Shiinaha Sida loo hubiyo waxqabadka xiritaanka waxsoosaarka iyo birta ee birta birta ah ee birta ah Shineway
Sida loo hubiyo waxqabadka qufulka ee birta birta ee birta ah ee birta ah
Si loo hubiyo waxqabadka daboolida birta birta ee birta ah ee birta ah marka dhexdhexaadka hawlgalka hooseeyo, cadaadis cayiman oo horay loo adkeeyo ah waa in laga sameeyaa inta u dhexeysa kubbadda iyo kursiga wax lagu xiro. Kursiga adag ee wax lagu xiro, isku halaynta iyo nolosha adeegga birta birta ee birta ahaanta leh ayaa lagu xirayaa xulashada saxda ah ee qaddarka horay loo adkeeyay ee kursiga qufulka.
Kalsoonida iyo nolosha adeegga birta birta ee birta ahaanta leh; ku dheji qadarka horay loo adkeeyay ee xulashada saxda ah ee kursiga wax lagu xiro. La'aanta hore-u-adkeynta ma xaqiijin karto culeyska cadaadiska hoose ee waalka kubbadda: sii-adkeynta oo aad u ballaaran waxay sababi doontaa isku-dheellitirnaanta isku-dhafan ee u dhexeysa kubbadda iyo kursiga xirashada si ay u kororto, taasoo saameyn ku yeelata waxqabadka ficilka ee birta biraha ah ee birta ah; waxayna sababi kartaa cilad caag ah oo ku taal kursiga wax lagu xiro, taasoo keenta inuu xirmo cillad la'aan. Marka laga hadlayo kursiga daboolida PTFE, cadaadiska gaarka ah preload guud ahaan waa inuu ahaadaa 0.1 PN oo aan ka yarayn 1.02 MPa.
Isku hagaajinta qaddarka horay loo adkeeyay ee kursiga adag ee wax lagu xiro waxaa lagu dhammeeyaa iyadoo la beddelayo dhumucda goomaha isku hagaajinta. Khaladka hawsha ee goomaha hagaajinta shaabadu wuxuu saamayn ku yeelan doonaa saamaynta hagaajinta: qalabka macquulka ah iyo hagaajinta ayaa fure u ah helitaanka waxqabadka xiritaanka wanaagsan. Hawlgalka, ka dib marka kursiga shaabadda la xiro, awoodda hagaajinta firfircoon ee preload cadaadiska qaaska ah waa mid aad u liidata, sidaa darteed nolosha adeegga qalabka adag ee qaabdhismeedka kursiga adag ee kubbadda ayaa aad u gaaban.
Mid ka mid ah siyaabaha loola tacaali karo dhibaatada waa in la doorto kursi shaabad leh walxaha laastikada ah. Waqtigan xaadirka ah, helitaanka iyo hagaajinta qadarka horay loo adkeeyay kuma xirna ku xirnaanta goomaha hagaajinta shaashadda laakiin waxaa dhameystiraya curiyaha laastikada ah. Marka lagu daro helitaanka xaddiga horay loo adkeeyay ee loo baahan yahay, kursiga wax lagu xiro ee leh walxaha laastikada ah ayaa sidoo kale magdhow u noqon kara cadaadiska gaarka ah ee horay loogu sii adkeynayo kala duwanaanta isbedelka laastikada ee curyaaminta. Sidaa darteed, nolosha adeegga ee waalka kubbadda waa mid aad u dheer.
Fure u ah shaabadaynta biraha birta ee birta ah ee birta ah waxay kuxirantahay qaab dhismeedka kursiga wax lagu xiro iyo xulashada qalabka kursiga wax lagu xiro. Marka loo eego qaab-dhismeedka iyo shuruudaha dalabyada kala geddisan, si caqli-gal ah u xulo habka qaab-dhismeedka kursiga wax lagu xidho si loo hubiyo tiknoolajiyada farsamaynta wanaagsan ee kursiga wax lagu xidho: xulo qalabka wax lagu xidho oo leh shaqo aad u fiican iyo shuruudaha dalabyada dhaqameed si loo buuxiyo shuruudaha wax lagu xidho ee qalabka wax lagu xidho iyo horumarka isku halaynta iyo adeegsiga qalliinka waalka kubbadda Cimrigeedu waa tixgelin muhiim ah qorshaynta hagaajinta waalka kubbadda.